ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်း | Radio Veritas Asia
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်း
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်း အမှတ်စဉ်(၁/၂၀၁၉)
ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကရင်စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှု စွမ်းရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းကို ၂၀၁၉ခုနှစ် ဇူလိုင်လ ၈ရက်နေ့မှ ၁၀နေ့အထိ၃၇က်တာကို ဧရာဝတီတိုင်း၊ ပုသိမ်မြို့ရှိ ကရုဏာ လူမှုစည်းလုံးညီညွတ်ရေးစင်တာတွင် ပြုလုပ်ခဲ့ပါသည်။
သင်တန်းကို တက်ရောက်လာသူ ဧည့်သည်တော်များ၏ မိတ်ဆက်ခြင်းအစီအစဉ် ဖြင့်စတင်ခဲ့ပြီး ဆရာဖူဒေးဗစ်မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားခြင်း၊ ဆရာစောခယ်လင်း၏ လမ်းညွန်အမှာစကားပြောကြားခြင်းနှင့် ဧရာဝတီတိုင်းကရင်စာပေနှင့် ယဉ်ကျေးမှုဥက္ကဌ Fr.Henry မန်းအိုင်ခလိမ်မှ အခမ်းအနားအစီအစဉ်များကို ကြေညာခြင်းဖြင့်စတင်ခဲ့ပါသည်။ သင်တန်းကို ဦးဆောင်ပို့ချပေးသောသူများမှာ ဆရာဂျိုးဇက်ဝင်းလှိုင်ဦး၊ ပုသိမ်ကရုဏာလူမှုစည်းလုံးညီညွတ် ရေးအသင်းစီမံကိန်းမန်နေဂျာဆရာအိုင်စီဒိုစောကိုကို၊ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာနမှ လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စန်း၊ တိုင်းရင်းသားစာပေ နှင့် ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနမှ ဆရာမကြီးဒေါ်ရီရီဝင်း နှင့် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူး ဒုညွန်ကြား ရေးမှူး ဦးသိန်ကျော်တို့ဖြစ်ကြပါသည်။
ယခုသင်တန်းကိုပြုလုပ်ရခြင်း၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ ‘‘ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကရင်စာပေ နှင့်ယဉ်ကျေးမှုကော်မတီသည် စံချိန်စံညွန်းနဲ့ပြည့်ဝပြီး ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီ စီမံကိန်းကော်မတီအဖွဲ့ အစည်းတစ်ခုဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သင်တန်းကိုပြုလုပ်ရခြင်း’’ ဖြစ်ကြောင်းသိရပါသည်။ စီမံကိန်းရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီး ဆရာအိုင်စီဒိုစောကိုကိုမှ ဘာကြာင့်စီမံကိန်းကိုလုပ် ဆောင်ရတာလဲ? စီမံချက်စက်ဝန်းဆိုတာဘာလဲ? စသည်ဖြင့် အဆင့်မှီသော စီမံကိန်းတစ်ခု ရေးဆွဲခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများကိုပို့ချပေးခဲ့ကာ၊ ဆရာဂျိုးဇက်ဝင်းလှိုင်ဦးမှ ခေါင်းဆောင်မှုနှင့် ခေါင်းဆောင်မှုနှင့်စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းဆောင်ရည်အကြောင်း၊ စီမံခန့်ခွဲမှု အနုပညာ (၂၀)အကြောင်း၊ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဥပဒေ၊ သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နှင့် နည်းပညာများ အား စီမံခန့်ခွဲမှုများကိုလေ့လာခြင်း နှင့် ရည်မှန်းချက်ကြီးသော ခေါင်းဆောင်မှုဆိုင်ရာ အကြောင်း အရာများကိုပို့ချပေးခဲ့ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများ ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီး ဌာနမှ လက်ထောက်ညွန်ကြားရေးမှူးဒေါ်စန်းက တိုင်းရင်းသားအခွင့်အရေးများကာကွယ် စောင့်ရှောက်ရေးဦးစီးဌာန၏ရည်ရွယ်ချက်များ၊ တိုင်ရင်းသားများ၏စာပေနှင့်မူဝါဒများ၊ တိုင်းရင်း သားလူမျိုးများ၏ အခွင့်အရေးနှင့်ရပိုင်ခွင့်များအကြောင်းကို ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။ ဆက်လက်ပြီး ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီးပညာရေးမှူး ဒုညွန်ကြားရေးမှူးဦးသိန်းကျော်မှ အမျိုးသား ပညာရေး မဟာဗျူဟာမြောက်စီမံကိန်း၏ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်နှင့် မဟာဗျူဟာမြောက် အချက် (၉)ချက်ကို အကျယ်တ၀င့်ရှင်းလင်းပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားစာပေနှင့် ယဉ်ကျေး မှုဦးစီးဌာနမှ ဆရာမကြီးဒေါ်ရီရီဝင်းက တိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ၏ စကား၊ စာပေ၊ သမိုင်းအမွေ အနှစ်များ၊ အနုပညာများ၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ကျန်းမာရေး နှင့် လမ်းပန်းဆက်သွယ်ရေးများ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်အောင်လုပ်ဆောင်ကြရမည့်အကြောင်းကိုပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။
သင်တန်းပို့ချစဉ်များပြီးစီးသွားသည့်နောက်တွင် တိုင်ဒေသကြီး စာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဥက္ကဌ Fr.Henryမန်းအိုင်ခလိမ်မှ ၂၀၁၉ခုနှစ် နှစ်တစ်ဝက်အတွင်း လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီးသော လုပ်ငန်း စဉ်များအားပြန်လည်ဆွေးနွေးတင်ပြပြီးရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များဖြစ်သည့် ဧရာဝတီတိုင်း ကရင်စာ/ယဉ် နှင့် တိုင်း၊ ခရိုင်၊ မြို့နယ် ပညာရေးမှူးများတွေ့ဆုံရန်၊ ကရင်နေ့ထူးနေ့မြတ်များ ကျင်းပခြင်း ဆိုင်ရာများဆွေးနွေးရန်၊ သုံးလပတ်ဆွေးနွေးခြင်းများကို ခရိုင်အလိုက်အလှည့်ကျလုပ်ဆောင် သွားရန်၊ Grade2ပြုစုရေးတွင်ကူညီပေးရန်၊ ရံပုံငွေတိုးတက်အောင်ဆောင်ရွက်ရန်၊ ကရင် လူဦးရေကောက်ခံခြင်းတွင်ပါဝင်ကူညီရန် နှင့် တက္ကသိုလ်ကျောင်းသူကျောင်းသားများ ကရင်စာ သင်တန်းပြုလုပ်ပေးရန် စသည်များကိုရှေ့လုပ်ငန်းစဉ်များအဖြစ် လျာထားကြောင်း ဆွေးနွေး တင်ပြသွားပါသည်။ ဥက္ကဌမှ တင်ပြဆွေးနွေးမှုအပြီး သုံးရက်တာသင်တန်းမပြီးဆုံးခင်အချိန်တွင် ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ကရင်တိုင်းရင်းသားရေးရာဝန်ကြီး ဂါ့မိုးမြတ်မြတ်သူမှ ကရင်စာပေနှင့် ပတ်သက်သောအကြောင်းအရာများ၊ ကရင်စာ ဆရာ၊ မ များနှင့် ပတ်သက်သော အကြောင်းအရာ များ ကိုယ့်လူမျိုးအတွက်အလုပ်လုပ်ရာတွင် ဘောင်အတွင်းမှ လုပ်ဆောင်သွားလျှင် ဘာပြသနာ မှမရှိသောကြောင့် ဘောင်အတွင်းတွင်လုပ်ဆောင်ကြရန်၊ ယခုအချိန်တွင် ကိုယ့်ကရင်လူမျိုးများ သတိကြီးကြီးထားဘို့လိုအပ်လာပြီဖြစ်ကြောင်းကို သတိပေးပြောကြားသွားခဲ့ပါသည်။ တိုင်း စာ ၊ ယဉ် စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေး သုံးရက်တာသင်တန်းကို ၀န်ကြီးနှင့်တကွ တက်ရောက်လာသော တိုင်း စာ၊ယဉ် အဖွဲ့ဝင်များက ကရင်အမျိုးသား သီချင်းသီဆိုကာ သင်တန်းကိုအဆုံးသတ်ခဲ့ပါ သည်။ ယခုစွမ်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ရေးသင်တန်းသို့ တိုင်း စာ၊ ယဉ် အဖွဲ့ဝင်များစုစုပေါင်း ၄၅ဦးခန့် တက်ရောက်လာခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိပါသည်။